Ukuqoqwa kwedatha | I-Google ilusebenzisa kanjani ulwazi lwakho oluyimfihlo
Imenyu  
Zisebenza kanjani izikhangiso
Sifuna ukuthi uqonde ukuthi iyiphi idatha esiqoqayo nesiyisebenzisayo.
Uma usebenzisa amasevisi e-Google, uyasethemba ngedatha yakho. Kuyisibopho sethu ukuthi sicace mayelana nalokhu esikuqoqayo nokuthi sikusebenzisa kanjani ukwenza amasevisi ethu akusebenzele kangcono.
Nazi izinhlobo ezinthathu zedatha esiyiqoqayo:
Uma usebenzisa amasevisi ethu — isibonelo, wenza usesho ku-Google, uthola izikhombisi-ndlela ku-Google Amamephu, noma ubuke ividiyo ku-YouTube — siqoqa idatha eyisisekelo ukuze senze lawa masevisi akusebenzele. Lokhu kungafaka:
Izikhangiso ozichofozayo noma ozithephayo
Ikheli le-IP nedatha yekhukhi
Uma ungene ngemvume ku-akhawunti yakho ye-Google, silondoloza futhi sivikele okudalayo usebenzisa amasevisi ethu. Lokhu kungafaka:
Ama-imeyili owathumelayo uphinde uwamukele ku-Gmail
Oxhumana nabo obangezayo
Izithombe namavidiyo owalayishayo
Amadokhumenti, Amashidi, nezilayidi kuDrayivu
Izinto ezikwenza "wena"
Uma ubhalisela i-Akhawunti ye-Google, sigcina ulwazi oluyisisekelo osinika lona. Lokhu kungafaka i-:
Ikheli le-imeyili nephasiwedi
Idatha iwathuthukisa kanjani amasevisi e-Google
Nazi izindlela ezimbalwa esisebenzisa ngayo idatha ukwenza amasevisi ethu asheshe, ahlakaniphe futhi abaluleke kuwe.
I-Google Amamephu ikutholela kanjani izindawo ngokushesha
I-Google iluqedela kanjani ngokuzenzakalela usesho lwakho
I-YouTube iwathola kanjani amavidiyo ofuna ukuwabuka
I-Chrome iqedela kanjani amafomu akho
Usesho lwe-Google lukusiza kanjani ukuthi uthole ulwazi lwakho
Angakusiza kanjani umsizi wakho we-Google ukuthi wenze izinto
Uma usebenzisa uhlelo lokusebenza lwe-Google Amamephu, ifoni yakho ithumela idatha ngokungaziwa mayelana nendawo yakho emuva ku-Google. Lokhu kuhlanganiswa nedatha kusuka ebantwini abakuzungezile ukuqaphela amaphethini ethrafikhi. Isibonelo, amamephu angathola uma izimoto eziningi zihamba kancane emgwaqweni munye futhi akwazise ukuthi kunethrafikhi eningi. Ngakho-ke ngesikhathi esilandelayo amamephu ukwexwayisa ngengozi futhi ikuyalele emgwaqweni osheshayo, unedatha kusuka kwabanye abashayeli ongababonga ngesinqamuleli.
Uyazi uma useshela okuthile bese wenza iphutha — futhi ngandlela thile i-Google iyazi ukuthi ubuqonde ukuthini noma kunjalo? Imodeli yokulungisa isipelingi yethu isebenzisa idatha esuka kubantu abenze iphutha elifanayo ngaphambili ukuze ikulungisele lona. Sazi kanjalo uma uthayipha okuthi “Barsalona,” ungahle usho okuthi “Barcelona.”
Umlando wakho sosesho ungasiza ukuyalela i-Google ukuqedela ngokuzenzakalela usesho lwakho. Isibonelo, uma ngabe useshele "izindiza zase-Barcelona" ngaphambili, singakuphakamisa lokhu kubhokisi losesho ngaphambi kokuthi uqede nokukuthayipha. Noma uma uyifeni yeqembu lebhola futhi uvamise ukuseshela "Izikolo ze-Barcelona," singaphakamisa leyo ndlela elungile.
Sithola amacebo wokuthi yini edumile nethrendayo esuselwa kokuthi wonke umuntu ubukele ini. Lokhu kusisiza ukuthi siphakamise amavidiyo wakamuva namakhulu kakhulu kuzinhlobo ezihlukile — njengamathrekhi womculo aphezulu, okokufundisa kokuthi kanjani, nezindaba zakamuva.
I-YouTube iphinda income amavidiyo ongawathanda kususelwa kumavidiyo owabuke ngaphambilini. Uma ngabe uthanda ukubuka amakhava wengoma yetimu kusukela ku-Okuqinisekisiwe, singaphakamisa okuningi kusukela kuwo. Noma uma udlala igeyimu ejatshuliswe ngu-PewDiePie, singaphakamisa iningi lamavidiyo wakhe kanye namavidiyo afana nawo.
Ngaso sonke isikhathi wenza ukuthenga noma ubhalisela i-akhawunti ku-inthanethi, uchitha isikhathi ugcwalisa amafomu ngolwazi lwakho oluyimfihlo. Uma usebenzisa i-Chrome, singalondoloza izinto ezifana negama lakho, ikheli, inombolo yefoni, ikheli le-imeyili, nolwazi lokukhokha ukuze sikwazi ukuqedela ngokuzenzakalela lawo mafumo. Ungahlala uhlela izinkambu zokugcwalia ngokuzenzakalela noma ukhubaze lesi silungiselelo unaphakade.
Usesho lwe-Google lungalanda ulwazi kusuka ku-Gmail, i-Google Izithombe, Ikhalenda, nokuningi, futhi ibonise imiphumela yemiphumela yakho yosesho ukuze ungazenzeli wena. Vele useshe izinto ezifana nokuthi “isikhathi sami sikadokotela wamazinyo,” “ngibonise izithombe olwandle,” noma “likuphi ihhotela lami.” Uma nje ungene ngemvume, sizodonsa lolu lwazi kusuka kwamanye amasevisi e-Google futhi sukulethele noma ngesinyathelo esisodwa.
Noma ngabe usekhaya, noma ohambeni, umsizi wakho uhlala alungele ukukusiza. Uma ubuza umsizi wakho umbuzo noma umtshela ukuthi enze ini, usebenzisa idatha kusuka kumasevisi e-Google ukukutholela okudingayo. Isibonelo, uma ubuza “Iziphi izitolo eziseduze?” noma “Ingabe ngidinga isambuleli kusasa?” umsizi wakho usebenzisa ulwazi kusuka kumamephu akho nosesho kanye nendawo yakho, izintshisekelo zakho nezintandokazi ukukunika impendulo ehlobene kakhulu. Ungahlala uvakashela ithuluzi Umsebenzi wami ukubuka noma usule idatha eqoqwe kusuka ekusebenzisaneni nomsizi wakho.
Lawula umuzwa wakho we-Google
Nawa amanye amathuluzi ongawasebenzisa noma kunini ukuphatha ubumfihlo bakho.
Lawula izilungiselelo zakho zobumfihlo ku-Akhawunti Yami
Bona ukuthi iyiphi idatha eku-akhawunti yakho kokuthi umsebenzi wami
Phequlula iwebhu ngemodi ye-incognito
Noma ngabe usebenzisa i-akhawunti ye-Google, uyanquma ukuthi iziphi izinhlobo zedatha ezingenza ukuthi amasevisi e-Google akusebenzele kangcono. I-akhawunti yami ikunika ukufinyelela okusheshayo kumathuluzi akusiza ukuphatha ulwazi lwakho oluyimfihlo futhi avikele ulwazi lwakho.
Umsebenzi wami kuyindawo emaphakathi lapho ungathola khona yonke into oyiseshayo, oyibukayo, noyibukelile usebenzisa amasevisi ethu. Ukwenza kubelula ukukhumbula umsebenzi wakho wangaphambili we-inthanethi, sikunika amathuluzi ngesihloko, usuku, nomkhiqizo. Ungasula unaphakade imisebenzi ethile noma izihloko zonke ongafuni ukuhlobanisa i-akhawunti yakho nazo.
Umlando wakho wewebhu ungenza imiphumela yakho yosesho ukuthi ibaluleke, kodwa kunezikhathi lapho ofuna ukuphequlula khona ngokwemfihlo. Uma wabelana ngekhompyutha nobathandayo, isibonelo, awufuni ukuthi umlando wakho wokuphequlula umoshe isipho sosuku lokuzalwa osiseshayo. Ngezikhathi ezifana nalezi, vula iwindi le-incognito kukhompyutha yakho noma idivayisi yeselula ukugwema i-Google Chrome ukuthi ingalondolozi umlando wakho wokuphequlula.
Inqubomgomo Yobumfihlo I-akhawunti yami